Inona ireo ohatra momba ny varotra Internet marketing?
Marina fa afaka mahatratra ny fitarihana mahomby sy ny fampivoarana marina amin'ny varotra ny olona iray rehefa manampy amin'ny drafitra ara-barotra amin'ny Internet. Eto aho dia manasa ny fampielezan-kevitra an-tserasera amin'ny alàlan'ny fomba fitsaboana maimaim-poana amin'ny famokarana automation, mailaka fampiroboroboana, web analytics ary ny fitaovana ankapobeny amin'ny CRO (fanatsarana ny fiovan'ny toetr'andro), miampy ireo fitaovana amin'ny aterineto mety hanaraka ny antontan'isa. Noho izany, ity no tena fototry ny fananganana fototra ho an'ny drafitra sy hetsika hafa mifantoka amin'ny marketing Internet. Andao isika hanao asa am-pahamendrehana ary hahazo fanohanana amin'ireo lafiny telo fototra amin'ny dikan-tserasera maoderina - USP, Web Design, ary koa ireo bala amin'ny bitsiky ny Search Engine Optimization.
Dingana voalohany - USP
Voalohany indrindra, ny fampiharana mivantana amin'ny Internet ara-barotra stratejika dia avy amin'ny orinasa iray voafaritra tsara (a. K. ny. fanolorana mpivarotra tsy manam-paharoa). Midika eto aho fa ny fanomezana ny vokatra tsara indrindra na ny serivisy dia fanapahan-kevitra tsara sy azo ekena foana hiditra ao amin'ny faritra fanta-daza. Amin'izany fomba izany, dia tokony hanome ny zavatra ilain'ny mpanjifanao mety ianao, ka hahatonga ny fahasamihafana lehibe indrindra hijanonana amin'ny fifaninanana amin'ny tsena. Raha toa ka miditra amin'ny faritra mampidi-doza eo amin'ny sehatra misy herisetra sy mifaninana ny orinasa, dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fomba fijery vaovao, mamorona ary mamolavola ny fametrahana famonoana bebe kokoa.
Dingana faharoa - Web Design
Ny fananana raki-peo amin'ny Internet dia tokony ho lasa voalohany indrindra amin'ny drafitr'asam-pandraharana ara-barotra amin'ny Internet ao amin'ny tranonkalanao.Na izany aza, matetika, maro ireo tranonkala tranonkala sy webmaster vaovao no tsy mahafantatra ny endriky ny tranonkala ho toy ny singa manan-danja amin'ny maha-zava-dehibe ny zava-dehibe ho an'ny tetik'asa ara-barotra maoderina an-tserasera. Voalohany indrindra, ny kalitaon'ny tranonkalanao dia misy fiantraikany mivantana amin'ny mpitsidika anao, mba hahalava kokoa ny habetsaky ny fotoana laniana amin'ny fanaraha-maso an-tariby alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra farany hametrahana ny baiko na hividianana anao.
Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hanamboatra ny tranonkalanao miaraka amin'ny:
tsara tsy misy pentina sy maso manintona maso izay mitaky asa;
sarin'ny pejy mazava tsy misy fetra miaraka amin'ny singa ao amin'ny pejy;
votoatin'ny tranonkala mahaliana, mandresy lahatra sy manan-danja;
ireo vahaolana amin'ny alàlan'ny famoaham-bokatra miompana am-pahamalinana ho an'ny fampiantranoana sary sy horonan-tsary;
robuste sy tsara optimisée ho an'ny traikefa tsara indrindra amin'ny alalan'ny fitaovana portable toy ny smartphones sy tablette.
Dingana telo - SEO
Manaraka ny fanapahan-kevitr'ilay toro-làlana Search Engine Optimization toy ny singa fototra amin'ny tsenan'ny aterineto stratejika ankehitriny. Andeha hojerena izany - ny fanatontosana fanamafisana ara-drariny dia ny hany fomba tokana ahafahana maneho ny tranonkalanao eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google. Vola mangatsiaka iray monja amin'ny tombantomban'ny statistika - efa ho ny 90% -n'ireo klikan'ny mpampiasa dia matetika hita eo amin'ireo valin'ny fikarohana voaloka telo voalohany. Izany no mahatonga ahy hamporisika anao hifantoka amin'ny sehatra SEO anao momba ireo sombin-tranonkala fitadiavam-bala manaraka ireto:
mitazona ny dika mitovy sokajy 2-3% miaraka amin'ireo teny manan-danja indrindra, saingy ny teny tsy dia misy dikan'ny teny mahaliana sy ireo sora-bolana manan-danja;
miasa tsara amin'ny fanatsarana votoatin'ny pejy (Meta tags, lohateny pejy, lohateny, URLs, sns.);
mitantana ny drafitr'asa hikarakarana tsara ny fampiasana tsara ny fampivoarana ny fifandraisana amin'ny kalitao;
hamenoana ny fitadiavanao sitemap mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ireo mpampiasa mivantana sy ny famandrihana botsika ho an'ny tanjon'izy ireo Source .